लकडाउन र मदिरापान: कसरी गर्ने? के के कुरामा विचार पुर्‍याउने? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउन र मदिरापान: कसरी गर्ने? के के कुरामा विचार पुर्‍याउने?
लकडाउन र मदिरापान: कसरी गर्ने? के के कुरामा विचार पुर्‍याउने?
हामीले लकडाउनका बेला दिनहुँ घरैभित्र कैद हुनुपरेको अवस्थाबाट सिर्जित तनावसँग कसरी जुझ्ने? विश्वका एक चौथाइ मानिसहरू अहिले यही प्रश्नमा घोत्लीरहेका छन्।कतिपय मानिसका निम्ति रक्सीसेवन एकान्तसँग जुझ्ने उपायको रूपमा देखा परेको छ।
अमेरिकाबाट प्राप्त आँकडा अनुसार सर्वेक्षण गर्ने निल्सनले मार्च २१ मा सकिएको एक साताको अवधिमा, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा, त्यहाँ रक्सीको विक्री ५५ प्रतिशतले बढेको पाएको थियो।युके तथा फ्रान्सबाट प्राप्त आँकडामा पनि रक्सीको विक्री बढेको देखिएको छ। त्यसले मानिसहरूले मदिराको सहारा लिँदा स्वास्थ्यमा अन्य जटिलता बढ्ने चिन्ता बढेको छ।
अमेरिकामा रक्सीको विक्री बढेको छ
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु एच ओ) ले महामारीको बेला उत्पन्न हुने तनावसँग जुझ्ने बारे प्रस्ट सुझाव दिएको छ। उसले आफ्ना मनोभावनासँग जुझ्न मदिरापान वा चुरोट वा लागुऔषधको सहारा नलिन चेतावनी दिएको छ।
दक्षिण अफ्रिका तथा भारतजस्ता देशले भने लकडाउनसँगै रक्सीको विक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् ताकि मानिसहरू कतै हेलमेल नगरुन्।
त्यसले दक्षिण भारतीय राज्य केरलाका रतीश सुकुमारनजस्ता मानिसका सामु गम्भीर चुनौती खडा भएको छ।”म नियमित रक्सी पिउँछु,” रतीश भन्छन्। “तर रक्सी पिउन नपाउँदा र घर बाहिर निस्कन नपाउँदा म अप्ठेरोमा परेको छु।”
रतीश सुकुमारनले प्रतिबन्धलाई रक्सी छाड्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने बताएका छन्फिल्म तथा टिभी उद्योगमा काम गर्ने ४७ वर्षीय यी लेखकले आफूलाई जँड्याहा ठान्दैनन्।”तर बेलाबेला म रक्सी सम्झिरहेको छु,” उनले भने।
भारतको तीन हप्ता लामो लकडाउनले उनलाई आफू रक्सीमा कति निर्भर रहेको खुलाएको बताए।उनले अब यसलाई रक्सीको कुलत त्याग्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।रतीश केरलाको राजधानी तिरुवनन्तपुरममा बस्छन्। त्यहाँ खानेकुरा र औषधिका बाहेक अरू सबै पसल बन्द छन्।गत पच्चीस वर्षदेखि नियमित रक्सी सेवन गर्दै आएका रतीशलाई अचेल नौलो अनुभव भइरहेको छ।
प्रहरीले कर्मचारीलाई राेकेपछि काठमाडौं उपत्यकाका सबै बैंक बन्द